1981 Burma Law Report p.1 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁ ဒေါ်ကြာ နှင့် ၁။ ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂။ ဒေါ်ဟန် Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ အရ အရးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ you tube channel မှ video linkများအား မည်သူမဆို share နိုင်ပါသည်။ The purpose of the audio book is to expand the legal knowledge and intended only for such purpose and shall not be cited as reference in courts and government offices. In cases where the video clip contradicts with the original law report, the expression contained in the original law report shall be deemed as correct. The owner of this audio book and video clip is U Aung Khine Oo, Daw Pyae Pyae Phyo and U Htain Lin Oo. No one shall publish nor distribute the downloaded audio book/video clip in any other platform or digital means without written permission from the owner. In such case, it shall be dealt in accordance with the existing law. However, anyone can freely share the video links of this you tube channel. Please like and subscribe the channel.
1981 Burma Law Report p.25 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၂၅ မစောမြ (ခ) မသန်းနွဲ့ နှင့် မချိုချိုမာ ပါ(၂)ဦး Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ အရ အရးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ you tube channel မှ video linkများအား မည်သူမဆို share နိုင်ပါသည်။ The purpose of the audio book is to expand the legal knowledge and intended only for such purpose and shall not be cited as reference in courts and government offices. In cases where the video clip contradicts with the original law report, the expression contained in the original law report shall be deemed as correct. The owner of this audio book and video clip is U Aung Khine Oo, Daw Pyae Pyae Phyo and U Htain Lin Oo. No one shall publish nor distribute the downloaded audio book/video clip in any other platform or digital means without written permission from the owner. In such case, it shall be dealt in accordance with the existing law. However, anyone can freely share the video links of this you tube channel. Please like and subscribe the channel.
1981 Burma Law Report p.6 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၆ ဦးကြီးဗြန် နှင့် မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် မန္တလေးမြို့ Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ အရ အရးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ you tube channel မှ video linkများအား မည်သူမဆို share နိုင်ပါသည်။ The purpose of the audio book is to expand the legal knowledge and intended only for such purpose and shall not be cited as reference in courts and government offices. In cases where the video clip contradicts with the original law report, the expression contained in the original law report shall be deemed as correct. The owner of this audio book and video clip is U Aung Khine Oo, Daw Pyae Pyae Phyo and U Htain Lin Oo. No one shall publish nor distribute the downloaded audio book/video clip in any other platform or digital means without written permission from the owner. In such case, it shall be dealt in accordance with the existing law. However, anyone can freely share the video links of this you tube channel. Please like and subscribe the channel.
1981 Burma Law Report p.56 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၅၆ ဦးထွန်းသက် နှင့် ဦးဖေခင် Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ အရ အရးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ you tube channel မှ video linkများအား မည်သူမဆို share နိုင်ပါသည်။ The purpose of the audio book is to expand the legal knowledge and intended only for such purpose and shall not be cited as reference in courts and government offices. In cases where the video clip contradicts with the original law report, the expression contained in the original law report shall be deemed as correct. The owner of this audio book and video clip is U Aung Khine Oo, Daw Pyae Pyae Phyo and U Htain Lin Oo. No one shall publish nor distribute the downloaded audio book/video clip in any other platform or digital means without written permission from the owner. In such case, it shall be dealt in accordance with the existing law. However, anyone can freely share the video links of this you tube channel. Please like and subscribe the channel.
1981 Burma Law Report p.115 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁၅ ဦး၀င်း ပါ(၂)ဦး နှင့် ၁။ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂။ ဦးအုန်းခင် (ခ) ဦးရှမ်းလေး Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ အရ အရးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ you tube channel မှ video linkများအား မည်သူမဆို share နိုင်ပါသည်။ The purpose of the audio book is to expand the legal knowledge and intended only for such purpose and shall not be cited as reference in courts and government offices. In cases where the video clip contradicts with the original law report, the expression contained in the original law report shall be deemed as correct. The owner of this audio book and video clip is U Aung Khine Oo, Daw Pyae Pyae Phyo and U Htain Lin Oo. No one shall publish nor distribute the downloaded audio book/video clip in any other platform or digital means without written permission from the owner. In such case, it shall be dealt in accordance with the existing law. However, anyone can freely share the video links of this you tube channel. Please like and subscribe the channel.
1981 Burma Law Report p.40 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၄၀ ဦးစိန်၀င်း ပါ(၇)ဦး နှင့် ဒေါ်ကြင်မြိုင် Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီးတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ အရ အရးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ you tube channel မှ video linkများအား မည်သူမဆို share နိုင်ပါသည်။ The purpose of the audio book is to expand the legal knowledge and intended only for such purpose and shall not be cited as reference in courts and government offices. In cases where the video clip contradicts with the original law report, the expression contained in the original law report shall be deemed as correct. The owner of this audio book and video clip is U Aung Khine Oo, Daw Pyae Pyae Phyo and U Htain Lin Oo. No one shall publish nor distribute the downloaded audio book/video clip in any other platform or digital means without written permission from the owner. In such case, it shall be dealt in accordance with the existing law. However, anyone can freely share the video links of this you tube channel. Please like and subscribe the channel.
1981 Burma Law Report p.11 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁ ဦးခင်အောင် နှင့် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် (မခင်ရှိန်၊ မတင်) Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ အရ အရးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ you tube channel မှ video linkများအား မည်သူမဆို share နိုင်ပါသည်။ The purpose of the audio book is to expand the legal knowledge and intended only for such purpose and shall not be cited as reference in courts and government offices. In cases where the video clip contradicts with the original law report, the expression contained in the original law report shall be deemed as correct. The owner of this audio book and video clip is U Aung Khine Oo, Daw Pyae Pyae Phyo and U Htain Lin Oo. No one shall publish nor distribute the downloaded audio book/video clip in any other platform or digital means without written permission from the owner. In such case, it shall be dealt in accordance with the existing law. However, anyone can freely share the video links of this you tube channel. Please like and subscribe the channel.
1981 Burma Law Report p.117 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁၇ ဒေါ် အေးညွန့် ပါ(၆)ဦး နှင့် မအေးထား ပါ(၃)ဦး Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီးတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ အရ အရးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ you tube channel မှ video linkများအား မည်သူမဆို share နိုင်ပါသည်။ The purpose of the audio book is to expand the legal knowledge and intended only for such purpose and shall not be cited as reference in courts and government offices. In cases where the video clip contradicts with the original law report, the expression contained in the original law report shall be deemed as correct. The owner of this audio book and video clip is U Aung Khine Oo, Daw Pyae Pyae Phyo and U Htain Lin Oo. No one shall publish nor distribute the downloaded audio book/video clip in any other platform or digital means without written permission from the owner. In such case, it shall be dealt in accordance with the existing law. However, anyone can freely share the video links of this you tube channel. Please like and subscribe the channel.
1980 Burma Law Report p.13 ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၃ ဦးစန်းအောင် နှင့် ဦးအောင်ကျော်ဝင်း Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ အရ အရးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ you tube channel မှ video linkများအား မည်သူမဆို share နိုင်ပါသည်။ The purpose of the audio book is to expand the legal knowledge and intended only for such purpose and shall not be cited as reference in courts and government offices. In cases where the video clip contradicts with the original law report, the expression contained in the original law report shall be deemed as correct. The owner of this audio book and video clip is U Aung Khine Oo, Daw Pyae Pyae Phyo and U Htain Lin Oo. No one shall publish nor distribute the downloaded audio book/video clip in any other platform or digital means without written permission from the owner. In such case, it shall be dealt in accordance with the existing law. However, anyone can freely share the video links of this you tube channel. Please like and subscribe the channel.
1981 Burma Law Report p.1 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁
1981 Burma Law Report p.1 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁ ဒေါ်ကြာ နှင့် ၁။ ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂။ ဒေါ်ဟန် Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်...
1981 Burma Law Report p.25 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၂၅
1981 Burma Law Report p.25 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၂၅ မစောမြ (ခ) မသန်းနွဲ့ နှင့် မချိုချိုမာ ပါ(၂)ဦး Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပ...
1981 Burma Law Report p.6 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၆
1981 Burma Law Report p.6 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၆ ဦးကြီးဗြန် နှင့် မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် မန္တလေးမြို့ Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေ...
1981 Burma Law Report p.56 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၅၆
1981 Burma Law Report p.56 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၅၆ ဦးထွန်းသက် နှင့် ဦးဖေခင် Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ အရ...
1969 Burma Law Report p1
1981 Burma Law Report p.115 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁၅
1981 Burma Law Report p.115 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁၅ ဦး၀င်း ပါ(၂)ဦး နှင့် ၁။ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂။ ဦးအုန်းခင် (ခ) ဦးရှမ်းလေး Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့...
1981 Burma Law Report p.40 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၄၀
1981 Burma Law Report p.40 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၄၀ ဦးစိန်၀င်း ပါ(၇)ဦး နှင့် ဒေါ်ကြင်မြိုင် Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီးတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်...
1981 Burma Law Report p.11 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁
1981 Burma Law Report p.11 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁ ဦးခင်အောင် နှင့် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် (မခင်ရှိန်၊ မတင်) Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖ...
1981 Burma Law Report p.117 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁၇
1981 Burma Law Report p.117 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁၇ ဒေါ် အေးညွန့် ပါ(၆)ဦး နှင့် မအေးထား ပါ(၃)ဦး Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီးတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြ...
1980 Burma Law Report p.13 ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၃
1980 Burma Law Report p.13 ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၃ ဦးစန်းအောင် နှင့် ဦးအောင်ကျော်ဝင်း Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ရူပါဇော်မင်း မှ ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပညာပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး တရားရုံးများနှင့် ရုံးအသီးသီတို့၌ ကိုးကားခွင့်မရှိပါ။ ဤvideo clipပါစာသားများနှင့် မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများကွဲလွဲပါက မူရင်းစီရင်ထုံးပါစာသားများသည်သာအမှန်ဖြစ်သည်။ ဤAudio book နှင့် video clipတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ ဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ ဦးထိန်လင်းဦး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ download လုပ်ကာ အခြား platformဖြစ်စေ၊ digital နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက တ...
1981 Burma Law Report p.1 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁ ဒေါ်ကြာ နှင့် ၁။ ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂။ ဒေါ်ဟန် Audio book ကိ...
1981 Burma Law Report p.25 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၂၅ မစောမြ (ခ) မသန်းနွဲ့ နှင့် မချိုချိုမာ ပါ(၂)ဦး Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်...
1981 Burma Law Report p.6 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၆ ဦးကြီးဗြန် နှင့် မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် မန္တလေးမြို့ Audio book ကို အထက်တန်း...
1981 Burma Law Report p.56 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၅၆ ဦးထွန်းသက် နှင့် ဦးဖေခင် Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထက်တန်းရှေ့န...
1981 Burma Law Report p.115 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁၅ ဦး၀င်း ပါ(၂)ဦး နှင့် ၁။ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂။ ဦးအုန်းခင် ...
1981 Burma Law Report p.40 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၄၀ ဦးစိန်၀င်း ပါ(၇)ဦး နှင့် ဒေါ်ကြင်မြိုင် Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး...
1981 Burma Law Report p.11 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁ ဦးခင်အောင် နှင့် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် (မခင်ရှိန်၊ မတင်) Audi...
1981 Burma Law Report p.117 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁၇ ဒေါ် အေးညွန့် ပါ(၆)ဦး နှင့် မအေးထား ပါ(၃)ဦး Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိ...
1980 Burma Law Report p.13 ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၃ ဦးစန်းအောင် နှင့် ဦးအောင်ကျော်ဝင်း Audio book ကို အထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦး၊ အထ...
1981 Burma Law Report p.1 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁ ဒေါ်ကြာ နှင့် ၁။...
1981 Burma Law Report p.25 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၂၅ မစောမြ (ခ) မသန...
1981 Burma Law Report p.6 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၆ ဦးကြီးဗြန် နှင့်...
1981 Burma Law Report p.56 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၅၆ ဦးထွန်းသက် နှင...
1981 Burma Law Report p.115 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁၅ ဦး၀င်း ပါ(၂)...
1981 Burma Law Report p.40 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၄၀ ဦးစိန်၀င်း ပါ(...
1981 Burma Law Report p.11 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁ ဦးခင်အောင် နှင...
1981 Burma Law Report p.117 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၁၇ ဒေါ် အေးညွန့်...
1980 Burma Law Report p.13 ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၁၃ ဦးစန်းအောင် န...
1981 Burma Law Report p.1 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင...
1981 Burma Law Report p.25 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနို...
1981 Burma Law Report p.6 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင...
1981 Burma Law Report p.56 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနို...
1969 Burma Law Report p1...
1981 Burma Law Report p.115 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိ...
1981 Burma Law Report p.40 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနို...
1981 Burma Law Report p.11 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနို...
1981 Burma Law Report p.117 ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိ...
1980 Burma Law Report p.13 ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနို...